Dr. Tint Swe's Writings: April 2018
ရေးထားတာ ၃ ရက်သာရှိသေးတယ်။ ထပ်တွေ့တယ်။
အရင်တယောက်ကလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးနော်.. ဗိုလ်တစ်ထောင် ဆံတော်ရှင်.. တဲ့။
ကျွန်တော်သိသလောက် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားသာရှိတယ်။ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဆိုတာ အသစ်တည်လိုက်တားလားတော့ မသိ။ ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်မရောက်တာ ၂၈ နှစ်ဆိုတော့ မသိပါ။ ဆောရီး။
တနေ့ကလည်း ဗောဓိတစ်ထောင်ဆိုပြီး ဘုရားဘွဲ့အမည်တော်ကို ပေါ်လစီသတ်ပုံပြောင်းရေးတာကို ဗောဓိတထောင် အမှန်သတ်ပုံကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ရေးလိုက်ရသေးတယ်။ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားရော သတင်းစာပါ အမိန့်ရသတ်ပုံတွေ ပြောင်းမထားကြောင်းပါ။
သတ်ပုံအမှားတွေကို သံသရာမှာ သယ်မသွားစေချင်ပါ။
1. Centrum အားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/centrum.html
2. Liver Tonics အသည်းအားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/liver-tonics.html
3. Tonics အားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tonics.html
4. Vitamin A ဗီတာမင် (အေ) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/vitamin.html
5. Vitamin B complex ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-b-complex.html
6. Vitamin B12 and Iron supplement ဘီ-၁၂ နှင့် သံဓါတ်လိုအပ်ချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-b12-and-iron-supplement.html
7. Vitamin C ဗီတာမင် (စီ) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/vitamin-c.html
8. Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-d.html
9. Vitamin E ညိုချောလေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-e.html
10. Vitamin K ဗီတာမင် (ကေ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-k.html
11. Vitamin Supplements and Children ကလေးအားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/vitamin-supplements-and-children.html
12. Vitamins and memory ဗီတာမင်တွေက မှတ်ဥာဏ်တိုးစေနိုင်သလား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/vitamins-and-memory.html
Mbps မြန်နှုန်း နှေးတဲ့အရပ်ဆီသို့
ကျွန်တော့်အချိန် ကနေ့ညပိုင်းကစပြီး မေးတာတွေကို အခုလိုဖြေနိုင်ပါတော့မလား မသိပါ။ ရက်တွေနည်းနည်း ကြာနိုင်တယ်။ အင်တာနက်နဲ့ ဝိုင်ဖိုင်အခက်အခဲရှိတဲ့နေရာကို သွားစရာရှိလို့။ အဖြေမလာရင် တခြားဆရာဝန်တွေကိုသာ မေးကြစေလိုပါတယ်။ ဆောရီး။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တနေရာနဲ့တနေရာ ကွာခြားချက်တွေက အမျိုးမျိုး။ အဲတာတွေကလည်း ပြောင်းလဲနေတယ်။ အခုဆိုရင် အင်တာနက်ရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ မရှိတဲ့နေရာတွေဆိုပြီး ကွာခြားသွားပြီ။ ရှိပြန်ရင်လည်း မြန်တဲ့နေရာနဲ့ နှေးတဲ့နေရာက ကွာသေးတာ။
အင်တာနက်မြန်နှုန်း ပျမ်းမျှ 7.2 Mbps သုံးနေကြတယ်။ ၂ဝ၁၆ ကထက် ၁၅% ပိုမြန်လာတာဖြစ်တယ်။ ၇-၆-၂ဝ၁၇ နေ့က သတင်းအရ ယူအက်စ်အေက 10.7 Mbps သာမြန်လို့ ထိပ်ဆုံး ၂၅ နိုင်ငံထဲမှာတောင် မပါ။ မြန်နှုန်းအများဆုံး ၁ဝ နိုင်ငံထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက တောင်ကိုရီးယား။ နံပတ် ၂ နော်ဝေ၊ ၃ ဆွီဒင်၊ ၄ ဟောင်ကောင်၊ ၅ ဆွစ်ဇာလန်၊ ၆ ဖင်လန်၊ ၇ စင်္ကာပူ၊ ၈ ဂျပန်နဲ့ ၉ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ။
ကမ္ဘာမှာ ယူအက်စ်အေက Wireline internet speeds မှာ နံပတ် (၁ဝ) နေရာနဲ့ Mobile internet speeds မှာ နံပတ် (၂၈) မှာသာ ရှိတယ်။ နောက်သတင်းတခုအရ အင်တာနက် အမြန်ဆုံးသုံးနိုင်တာ ယူကေနိုင်ငံလို့ ဆိုပါတယ်။ နောက် ရီပို့တ်တခု အဆိုအရ ယူအက်စ်အေထဲမှာ ဒစ်စရိတ်-ကိုလမ်ဘီယာဒေသက 28.1 megabits နဲ့အမြန်ဆုံး။ အဲဒီမှာ သမတရုံး၊ စစ်ဌာနချုပ် စတာတွေရှိတယ်။ သတင်းတခုအရ ယူအက်စ်အေမှာ မြန်နှုန်း အဆ (၅ဝ) တိုးပါမယ်တဲ့။
မေးတာတွေ အဖြေမလာရင် တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာ မေးကြစေလိုပါတယ်။ ဆောရီး။ လူ့အလို အင်တာနက်မလိုက်နိုင်။
Vitamin A ဗီတာမင်အေ နဲ့ ကြက်အရေပြား
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မ သမီးလေးက အသက် ၂နှစ် ၄လပါ ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်။ ကြာဆူးလေးတွေ ခြေသလုံးမှာ ထွက်ပြီး အရေပြား ကြမ်းကြမ်းလေးဖြစ်နေပါတယ်။ ပုံလေးတွဲပို့ပေးထားပါတယ် တနေ့ကို baby lotion ၂ကြိမ် လူးပေးပါတယ်။ သနပ်ခါးလည်း လူးပါတယ်။ အသားအရေခြောက်တဲ့ အမျိူးအစားပါ။ ခု ဂျိူင်းမှာ ထပ်ထွက်လာပါတယ်။ ပျောက်ကင်း နိုင်ပါ့ မလားရှင်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျမက အသက် ၄၃ နှစ်ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြာဆူးလို အဖုလေးတွေပေါက်လို့ ဆရာ့ကို မေးထားပါတယ်။ ကြာဆူးသေချာရင် ဗီတာမင်အေလိုမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ကြာဆူးသေချာအောင် ဘယ်လို စစ်ရမလဲဆရာ။ ညှစ်ရင်တော့ အဖုလေးတွေထွက်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေက ရန်ကုန်မှာ ဝယ်လို့မရဘူးဆရာ။ A ပါတဲ့ ဆေးဝယ်ထားထာ သောက်လို့ရမရစစ်ပေးပါဆရာ။
၃။ ဆရာရှင့် အခုပုံပါဆေးကို အမတယောက်သောက်တာ ခြောက်လအကြာမှာ မျက်မှန်ပါဝါနှစ်ရာကျော်ကနေ မျက်မှန်မလိုတော့ပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အခု သမီးတို့က ကွန်ပျူတာအမြဲကြည့်ရတဲ့သူတွေပါ ညဘက်ဆို မျက်လုံးတွေ အရမ်းပင်ပန်းနေပါတယ်။ အဲ့ဒီဆေးသောက်မယ်ဆိုရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိမရှိ သိပါရစေရှင့်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုမရှိပဲ သောက်သုံးလို့ ရနိုင်ပါသလားရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
၄။ ဆရာရှင့် Vitamin A 2100 IU ပါဝင်တဲ့ Calcivita ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောက်သင့်ပါသလား။ ကြွက်မတက်အောင် သောက်ဖို့ OG ကပြောထားလို့ပါရှင့်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်က Vitamin A များတာနဲ့ မသင့်တော်ဘူးလို့ ဖတ်ဖူးလို့ပါရှင့်။
၅။ ဆရာရှင့် ကျွန်မက အသက် ၂၄၊ သားဦးကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတာ ၃၅ ပတ်ရှိပါပြီ။မေးချင်တာကတော့ အပျိုတုန်းက တင်ပါးနောက်နဲ့ပေါင်ရင်းမှာ ကြာဆူး လိုဖုသေးသေးလေးတွေအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ အခုကိုယ်ဝန်ရမှာပိုများလာပါတယ်။ အဲ့ဒါဘာဓာတ်ချို့ချွင်းလို့လဲဆရာရှင့်။ ဘာဆေးလိမ်းပြီး ဘာဆေးသောက်လို့ရနိုင်မလဲဆရာ။
ဗီတာမင်အေနည်းတာ အစာအာဟာရချို့တဲ့သူ၊ အစောရှောင်လွန်းသူ၊ အသည်းခြောက်သူ၊ အရက်သောက်များသူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဗီတာမင်အေနည်းနေရင် Nyctalopia အလင်းရောင်နည်းရင် မျက်စိကနေ အဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်တာ နှေးတယ်။ ကြက်မျက်သင့်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ Keratomalacia မျက်စိရောဂါ၊ Xerophthalmia မျက်စိခြောက်ရောဂါ၊ မျက်ကြည်လွာ ပေါက်ခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ မျက်မှန်တပ်ရတာကိုတော့ အပြောင်းအလဲ ရှိစေမှာမဟုတ်ပါ။ လူကြီး = 15,000-500,000 နေ့စဉ်။ ကလေး = 20,000 IU/Kg ပေးတယ်။
Vitamin A 100,000 IU နေ့စဉ် ၃ ရက်သောက်ပါ။ နောက် 50,000 IU ၂ ပတ်သောက်ပါ။ နောက် 10,000-20,000 IU ၂ လသောက်ပါ။ ဗီတာမင် (အေ) ဟာ ငါးကြီးဆီ၊ အသည်း၊ ဥ၊ နို့နှင့် နို့ထွက်အစာများ၊ မုန်လာဥနီမှာပါတယ်။
Chicken skin ကြက်ရေအရေပြားလို့ခေါ်တာရှိတယ်။ လက်မောင်းနောက်ဖက်နဲ့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သေးသေးလေးတွေ၊ နည်းနည်းလေးအထက်ကြွနေမယ်။ Follicular hyperkeratosis မွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေပိတ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗီတာမင်အေ၊ ဘိုင်အိုတင်၊ သွပ်ဓါတ်နဲ့ အိုမီဂါသရီး ဓါတ်တွေနည်းလို့ ဖြစ်မယ်။
အဲတာတွေအပြင် အရေပြားခြောက်မယ်။ ဆံပင်ခြောက်မယ်။ ယားယံမယ်။ လက်ည်းခြေသည်း မာကြောမယ်။ ခုခံအား ကောင်းဘို့၊ ဆဲလ်တွေ အသစ်ဖြစ်စေဘို့လည်း အားပေးတယ်။ ဗီတာမင်အေ အမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိတယ်။ Retinol, beta Carotenoids နဲ့ Carotenoids တွေဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ ဗီတာမင် (အေ) များနေရင် ကလေးအင်္ဂါချို့ယွင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ မိခင်ကိုလဲ သွေးတိုး တက်စေတယ်။ ဗီတာမင် (အေ) 25,000 IU/kg ဆိုရင် အဆိပ်သဘောဖြစ်တယ်။ ငါးကြီးဆီထဲမှာ (အိုမီဂါ-သရီး) နဲ့အတူ ဗီတာမင် (အေ) နဲ့ (ဒီ) တွေလဲပါတယ်။ စားသောက်တာထဲမှာလဲ ဒီဓါတ်တွေပါနေတာမို့ များသွားရင်သာ သွေးခဲစနစ်ကို သက်ရောက်လို့ သွေးယိုနိုင်တယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူစရာရှိရင် ဒီဆေးသောက်နေရင် ၂ ပါတ်ကြိုတင်ပြီး မသောက်ဘဲ နေရမယ်။ ကယ်လိုရီအများကြီးရစေတယ်။ ငါးကြီးဆီလက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း (13.6 g) ထဲမှာ ငါးကြီးဆီ တနေ့တာ စားသုံးသင့်တဲ့ ဗီတာမင် (အေ) ထက် 136% ပါနေတယ်။ ပိုတဲ့ ဗီတာမင် (အေ) တွေက အသည်းမှာလာပြီး စုထားတယ်။ အဆင့်တခုရောက်လာရင် Hypervitaminosis A ဗီတာမင် (အေ) လွန်ကဲခြင်းရောဂါ ရလာမယ်။ ကီလို ၅ဝ ရှိသူ တယောက်ဟာ 1.25 kg စားသောက်ရင် အဆိပ်ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ (အိုမီဂါ သရီး) လိုတာထက် ပိုစားသူတွေမှာ ဆီးအကျိတ်ကင်ဆာ ပိုဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ ၂၅ နှစ်အရွယ် အတွက် တနေ့မှာ ဗီတာမင် (အေ) အများဆုံး 3,000 micrograms/day = 10,000 IU ဖြစ်တယ်။ များရင် ပျို့-အန်ချင်၊ အားယုတ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျ၊ မျက်စိ ကြည့်မကောင်း၊ ရာသီဆင်းမမှန်ဖြစ်မယ်။ ငါးတွေမှာသာမက အကောင်တွေရဲ့ အသည်းမှာလဲ ဒီဓါတ်ပါတယ်။ ဝင်ရိုးစွန်းနေ အကောင်တွေမှာ ပိုများတယ်။ (ပိုလာ) ဝက်ဝံအသည်း 30 - 90 grams စားလိုက်ရင် လူသေနိုင်တယ်။ စွပ်ဖါးဆွဲခွေးလဲ ရောဂါရမယ်။ ဗီတာမင် (အေ) များလွန်းရင် Osteoporosis အရိုးအားနည်းစေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ တနေ့ ဗီတာမင် (အေ) 5,000 IU ထက်မပိုရပါ။ မွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှာ (အေ) နည်းနေရင်လဲ မကောင်းပြန်ပါ။ မွေးပြီး ၂ ရက်အတွင်း 50,000 IU (15 mg) ပေးရင် မွေးစကလေးသေနှုန်း သိသိသာသာနည်းတယ်။
Vitamin B 1 (Thiamine) ဗီတာမင်ဘီဝမ်းကို ထုံနာ-ကျင်နာ၊ အာရုံကြောကောင်းစေဘို့ပေးပါတယ်။ အရက်နာကိုလည်း ပေးရတယ်။ ထုံနာကျင်နာ၊ အာရုံကြောအလုပ်ကောင်းစေဘို့ပေးတယ်။ ဗီတာမင်ဘီဝမ်းကို နည်းလွန်းရင်(ဗယ်ရီဗယ်ရီ) ရောဂါရစေတယ်။ အားယုတ်မယ်။ အစားမစားချင်ဖြစ်မယ်။ အသားမျိုးစုံ၊ (ရိစ်)၊ ဥ၊ အသည်း၊ အစေ့အဆံ၊ အသားတို့မှာ ပါတယ်။
Niti Literature နီတိကျမ်း
ကျွန်တော် လောကနီတိနှင့် ငြင်းခုန်ခြင်းရေးတာ ၅ ခုရှိပြီ။ အသိ ဦးဇင်းတပါးရဲ့ ကွန်မင့်လည်းရတယ်။ ကျေးဇူးပါဘုရား။
Ashin Nipuna လောကနီတိက အိန္ဒိယ သက္ကတကျမ်းကလို့ မှတ်ဘူးတယ်။ စတုရင်္ဂဗလအမတ်ကြီး မြန်မာဘာသာ ပြန်တာဖြစ်မယ်။ ပုနေးရောက်တော့ ပုနေးတက္ကသိုလ် ဆရာတစ်ယောက်က ဆွေးနွေးစရာရှိလို့ဆိုပြီး မေးဘူးတယ်။ သက္ကတကျမ်းက လောကနီတိမှာ ဂါထာတစ်ပုဒ် လိုနေလို့ဆိုပြီး ။ မြန်မာဘာသာ လောကနီတိမှာလဲ အဲဒီဂါထာ မပါဘူး။ သက္ကတနှင့်တူနေတယ် ဆရာ။
လောကနီတိဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘုရားဟော မဟုတ်ပါ။ သက္ကရာဇ် ၇ဝ၄ ခုနှစ် သီဟသူမင်းလက်ထက်က အမတ်ပညာရှိ စတုရင်္ဂဗလကနေ ပါဠိလိုစရေးခဲ့တယ်။ အမတ်ကြီးဟာ သဒ္ဒါကျမ်း၊ ကဗျာလင်္ကာ၊ ဓမ္မသတ်ကျမ်းနဲ့ စစ်မှုရေးရာ၊ အရည်အချင်းလေးမျိုးနဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့သိရပါတယ်။
နီတိဆိုတာ ပါဠိစာလုံးပါ။ မြန်မာလို လမ်းညွှန်လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ လောကနီတိဆိုတာ လောကအကြောင်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ကြီးပွါးတိုးတက်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ လောကနီတိအပြင်၊ တကျွန်းနီတိ၊ ရာဇနီတိ၊ ဓမ္မနီတိ၊ မဟာရဟနီတိတွေ ရှိသေးတယ်။ ဘုရားဟောမဟုတ်ပေမယ့် ဘုရားဟောကျမ်းဂန်တွေထဲက ကိုးကားချက်တွေ ပါနေတယ်။
အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ ဟင်ဒူဘာသာရေးထဲက Nitisastra နီတိဆက်စထရာဆိုတာက သက္ကတ (သင်္သကရိုက်) ဘာသာနဲ့ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို Ethics ဖြစ်တယ်။ မြန်မာလို ကျင့်ဝတ်၊ ကိုယ့်ကျင့်တရား၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာလို့ ဘာသာပြန်တယ်။ အဲတာက Bhagavad Gita ဘဂဗဒ် ဂီတထဲက Virtue နဲ့လည်းဆင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အမှန်နဲ့ အမှားကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
Virtue ကို သုစရိုက်၊ သူတော်ကောင်းတရားလို့ ဘာသာပြန်ပါတယ်။ အဲတာကိုပဲ ဝိကီပီးဒီးယားမှာ Dharma ဓမ္မလို့ ဆိုထားပါသေးတယ်။ အဲဒီ ဓမ္မက ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဓမ္မနဲ့ မတူပါ။ သူတို့ဆိုလိုတာက ကမ္ဘာမြေ၊ လူသတ္တဝါတွေနဲ့ သဘာဝတရားတွေမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့အရာတွေလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။
နီတိကျမ်းရင်းကို ဂျိမ်းစ် ဂရေးကနေ လန်ဒန်မြို့မှာ The Niti Literature of Burma ဆိုပြီးပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတက်တိုးကလည်း ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ရဲ့မူကနေ ယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လောကကိုကောင်းရာကောင်းကြောင်း လမ်းညွှန်တာတွေကို ဖတ်မှတ် လိုက်နာကြစေချင်တယ်။ ခေတ်အလျှောက် ပြင်သင့်တာတွေပြင်ရင်လည်း သဘောတူစရာရှိရင်တူပါမယ်။ ပြင်တာကိုလည်း ပြင်ထားတာလို့၊ တခြားကနေကိုးကားတာဆိုလည်း ယူထားတာလို့ ပွင့်လင်းရဲတင်းစွာပြောသင့်ပါတယ်။ သတ်ပုံကို ကိုယ်လိုသလိုပြင်တာ သဘောမတူပါ။
လိမ္မာယဉ်ကျေးမှု ရှိ-မရှိကို ကိုယ်အမူရာ နှုတ်အမူရာအားဖြင့် သိနိုင်၏။ ပညာရှိသည် မရှိသည်ကို ပြောဆိုသော စကားကို ထောက်ချင့်၍ သိနိုင်၏။
ကိုယ်အမူရာကို မသိ။ နှုတ်အမူအယာအရ မြန်မာစကားမှာ စကားသင်စကလေးငယ်တွေလို အသံထွက်ရင်ပြီးရော အဆင့်သာရှိမှန်း သိနိုင်သူ အတော်များ၏။
MAR 3RD, 5:17PM
You accepted Nwe's request.
ရေးထားတာကို အခုမှတွေ့။ ဆောရီး။
Nwe Lay accepted your request.
အင်းဆိုသူက ဆရာ့ထက်အသက်ကြီးပါသလား။ ဆရာက ၁၉၄၈ မှာ မွေးတယ်။
09/10/2016 8:30PM အချိန်က ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့်လို့ရေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်။ အဲဒီကနေ ဘလော့ရင်လည်း နှစ်ဦးလုံးအဆင်ပြေမယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီကနေ ဘလော့လိုက်မယ်။ ဆရာ့မှာ အချိန်နည်းလို့။ ကျန်းမာရေးမေးတာတွေကို ဖြေစရာရှိလို့။ ဆောရီး။ ဘလော့လိုက်ပါပြီ။
အဲဒီကတည်းက မင်္ဂလာပါဆိုရင် လန့်နေရတယ်။
Health Articles ကျန်းမာရေးစာတိုင်း ဆရာဝန်ရေးတာ မဟုတ်ပါ
ဆရာ သမီးကျန်းမာရေးဆောင်းပါးတခုမှာ ဖတ်ဖူးတာပေါ့နော် လေဖြတ်ခါနီး ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေထဲမှာ ရေချိုးပြီး မျက်စိ် ကြာရှည်နီနေခြင်းဆိုပြီး ပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါ မှန်လားမသိဘူး။ သမီးဖေဖေက အဲ့လိုမျိုး ခဏခဏဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ ရေချိုးပြီး မျက်စိနီနေတာ သမီးတို့မေးတော့ ခေါင်းလျှော်တာ ရေဝင်တာဖြစ်မှာပါလို့ပဲဖြေတယ်ဆရာ။ တကယ်လို့ အပေါ်က ဆောင်းပါးပါအချက်က မှန်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကာကွယ်မှုလုပ်လို့ရမလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
အဲဒီဆောင်းပါးဆိုတာ ဆရာဝန်ကရေးတာလား၊ တိုင်းရင်းနည်းလား၊ မီဒီယာလား၊ ဆေးကြော်ငြာလား။ မျက်စိနီတာမှာ Pink eyes ဆိုတာတမျိုးနဲ့ Conjunctivitis တမျိုးရှိတယ်။ လေဖြတ်တာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါ။ လေဖြတ်ခြင်း အကြောင်းစာ တင်ထားပါတယ်။
ဆရာဝန်စာ ဘယ်သူကရေးရေး ဆေးသုတေသန ကိုးကားတာမပါရင်။ ချဲ့ကားရေးထားရင်၊ ခြောက်လှန့်ရေးရင်၊ လျော့ပေါ့ရေးရင် မသင့်ကြောင်းပါ။ ကျန်းမာရေးစာတိုင်း ဆရာဝန်ရေးတာ မဟုတ်ပါ။ စာရေးကောင်းသူတွေရေးတာ ဖတ်လို့တော့ကောင်းတယ်။ မီဒီယာသမားတွေရေးတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်း။ ဒါပေမဲ့ ရောဂါကို မပျောက်စေပါ။ ဆောရီး။
- Conjunctivitis မျက်စိနာခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/…/conjunctivitis.html
Diabetes ဆီးချိုဖြစ်နေသော မြန်မာစာ
ပုံပါစာရေးသူက အရင်မေးခွန်းတွမှာ ဆီးချိုရောဂါအကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုရေးမေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတခါ ပုံကိုပို့မေးတယ်။ အောက်ဆုံးမှာတော့ သူဟာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာမွေးသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မြန်မာစာအားနည်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်နယ်နိမိတ်ထဲက ဘယ်မှမထွက်ရသူတွေလည်း မြန်မာစာ အားမရှိကြတာ စိတ်မကောင်းပါ။
3. Deadly diabetes in unrelenting march ဆီးချိုကို ပိုပြီးသတိထားကြပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/deadly-diabetes-in-unrelenting-march.html
4. Diabetes and Tobacco ဆီးချိုနဲ့ ဆေးလိပ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/diabetes-and-tobacco.html
5. Diabetes Complications ဆီးချို နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်သည်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/diabetes-complications.html
6. Diabetes diet http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/diabetes-diet.html
7. Diabetes diet ဆီးချိုအတွက်အစားအစာများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/diabetes-diet.html
8. Diabetes type 1 cure ဆီးချိုအမျိုးအစား (၁) ကို ပျောက်နိုင်ဘို့ နီးစပ်လာပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/diabetes-type-1-cure.html
9. Diabetes ဆီးချို http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/diabetes.html
10. Diabetic food ဆီးချိုနဲ့ အစားအသောက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/diabetic-food.html
11. Diabetic neuropathy ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/diabetic-neuropathy.html
12. Final piece of type 1 diabetes puzzle solved ဆီးချိုပဟေဠိအဖြေရရှိ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/final-piece-of-type-1-diabetes-puzzle.html
13. Gestational Diabetes ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆီးချို http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/gestational-diabetes.html
14. Liver disease and Diabetes အသည်းနဲ့ဆီးချို http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/liver-disease-and-diabetes.html
15. Metformin ဆီးချိုစားဆေး ဘယ်လိုပေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/metformin.html
16. Weight loss surgery cures half of type-2 diabetes cases http://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/weight-loss-surgery-cures-half-of-type.html
17. Yogurt reduces diabetes risk (ရောဂတ်) စားခြင်းဖြင့် ဆီးချိုကို သက်သာစေနိုင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/yogurt-reduces-diabetes-risk.html
18. ဆီးချိုပျောက်ဆေး မပေါ်သေးပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/blog-post_82.html
၁။ ဆရာရှင့် မေးခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်မ ဖေဖေ အသက် ၅၉ ပါ။ အသဲကင်ဆာ အဆင့် ၄ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောပါတယ် B ပိုး C ပိုး လုံးဝ မရှိပါလို့လဲ ပြောပါတယ်။ အခု ဖေဖေက တိုင်းရင်းဆေးတွေပဲ သောက်နေပြီး ဆရာဝန်ဆက်မပြပဲ နေနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ပြောမရပါ။ အသဲကင်ဆာ အဆင့် ၄ အနေဖြင့် အသက်အန္တာရာယ် စိုးရိမ်ရမှုလေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေး သိချင်မိပါတယ် ရှင့်။ အသဲကင်ဆာလို့ သိရတာကတော့ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် ၂၀၁၈ မှသိရပါတယ်။ ခု ဗိုက်ကတော့ ရေဖျင်းစွဲသလို ပူနေပါပြီ။ ခြေထောက်တွေတော့ ယောင်နေပါတယ်။ ဆီး သွားပါတယ်။ အစားသောက် က ခံတွင်းမပျက်ပေမဲ့ ဗိုက်က အများကြီး မစားနိုင်ပါဖူး။ ဆရာထံမှ အကြံပြုချက်ကို စောင့်မျှော်နေပါမယ်ရှင့်။
၂။ ဆရာရှင့် လူနာက သမီးအဖေပါ၊ အသက်က ၆၆ နှစ်ရှိပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာလို့ 26.5.17 မှ CT scan ရိုက် အကျိတ်လို့သိရတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လက သွေးအန်လို့ မန္တ္တလေးဆေးရုံကြီးမှာတက် ကုပါတယ်။ အဲ့အချိန် မှာ B ပိုး Positive ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်တော့ အူလမ်းကြောင်းမှာ သွေးကြောတွေဖောင်းနေလို့ သရေကွင်းခြောက်ချက်ပစ်ပြီး ကုပါတယ်။ ဆေးရုံ မှာ ၆ရက် လောက်တက်ပြီးကုပါတယ်။ ၁၅ ရက်ကြာတကြိမ်၊ နောက် ၁ လတကြိမ် ၂ခါ ပြပြီး မှန်ပြောင်းပြန်ကြည့်ပါတယ်။ အဲ့လိုကုနေစဉ် ၃လ အတွင်းမှာ အသည်းဆရာဝန်နဲ့ပြပြီး B ပိုး ပျောက်ဆေးစားပါတယ်။ လူနာမှာ အခုထိ ကင်ဆာလက္ခဏာ မပြသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့အချိန်က သွေးလဲ ထပ်မစစ်ခိုင်းပါ။ အခု ဆေးစားလို့ ၃လ ပြည့်ပြန်ပြတော့မှ သွေးစစ်၊ ကင်ဆာဖြစ်နိုင် CT scan ရိုက် အကျိတ်တွေ့ပြီး ဆေးဖြန်းဖို့ (သို့) အကျိတ်ကိုချေမယ်လို့ပြောပါတယ်၊ ကင်ဆာဆိုတော့ အခြေအနေ မကောင်းမှန်းသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအသည်းကင်ဆာအမျိုးအစား၊ ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီ၊ ဘယ်နည်းလမ်းကတော့ ပိုကောင်းပြီး သက်သာနိုင်လိမ့်မယ် ဆိုတာမျိုး၊ သိချင်ပါတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာ့ထံမှာ အကူအညီတောင်းခံချင်ပါတယ်။ လူနာက့့ ကပါ၊ အခုသမီးရှိတဲ့ရန်ကုန်ကိုခေါ်ထားလိုက်တယ်။ ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုရပြီးကုန်ရကျိုးနပ်ချင်ပါတယ်။ လူနာကိုနောက်ဆုံးအချိန်လုပ်ပေးနိုင်တာ၊ လုပ်ပေးသင့်တာကို သမီးတယောက်အနေနဲ့ ရှိတာလေးနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ကုပေးချင်လို့ပါ။ ဆရာကူညီ ပြီးလမ်းညွှန်မှုပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို စောင့်မျော်လျှက်။
မေးခွန်းအရ ဆရာဝန်တွေက လုပ်သင့်တာတွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်နေးနေတယ်လို့သိနိုင်။ သားသမီးအနေနဲ့ အဲလို စိတ်ထားရှိတာ အလွန်ကောင်း။ စိတ်ကိုအပြုသဘောထား ကံတရားလည်း အားကိုးပါလေ။
၃။ ဆရာရှင့် အသည်းကင်ဆာက ရောဂါ လက္ခဏာကို အချိန်လွန်မှသိရတာလားရှင့်။ သူငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တာ တလဘဲခံပြီး ဆုံးသွားပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်တာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲရှင့်။
၄။ ဆရာ ကျွန်မဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ရောဂါအတွက် ကုသပုံအကြံလေးပေးပါရှင့်။ ခွဲစိတ်လို့ရမလားသိချင်ပါတယ်။ ကမ်းဇော်ဆီကို ကင်ဆာပျောက်တယ်ဆိုပြီးတိုက်ချင်နေကြလို့ သင့်မသင့်ဖြေပေးပါရှင့်။ အသည်းကင်ဆာ အဆင့်ဆင့်ကို ဗဟုသုတရစေရန် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။
၅။ ကျမအမေက အသည်းမှာအလုံးတွေ့တယ်။ ခွဲထုတ်ရမယ်။ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အရွယ်က ၄ စင်တီမီတာတဲ့။ အသက်က ၇ဝ ကျော်ဆိုတော့ မခွဲချင်ပါဘူး။ ဘာလုပ်သင့်လည်းဆိုတာ ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးလည်းတင်ပါတယ်ရှင့်။ ကူညီကြပါဦးနော်။ ကျမလည်း ရင်တွေပူနေပါပြီ။ ct Scan ရိုက်တာ ၂ ပါတ်ခန့် ရှိပါပြီ။ ကုတင် ၅ဝဝ က အသည်းဆရာဝန်တွေက ခွဲထုတ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ အမေက လုံးဝမခွဲချင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကူညီပေးပါဦးဆရာရှင့်။
၆။ ကျမအဖေက အသည်းကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဘီပိုး စီပိုးမရှိ၊ အရက်မသောက်ဘဲ၊ ဒီရောဂါနဲ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ ဆီများတဲ့ဟင်း လဘက် ငါးခြောက် သရက်သီးသနပ် တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ ဆရာပြောသလိုပါဘဲ ရောဂါလက္ခဏာတွေ တောက်လျှောက် ခံစားမြင်တွေ့နေရတာပါ။ အသည်းကင်ဆာလို့ကြားရတိုင်း ရင်ထဲနာကျင်ထိခိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့အပြင် ဆရာ့ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသိပေးမှုကြောင့် သတိပြုစရာတွေပိုရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၇။ သမီးအဖေလည်း အသည်းကင်ဆာပါ။ သုံးပုံ နှစ် ပုံ ပြန့်နေပြီပြောပါတယ်ဆရာ။ ပြီးတော့ အစာအိမ်က သွေးကြော စိမ့်ထားပါတယ်။ အဲဒါ အစာအိမ် မှန်ပြောင်းကြည့် သင့် မသင့် သိပါရစေဆရာ။
၈။ ဆရာရှင့် အသည်းကင်ဆာက ရောဂါ လက္ခဏာကို အချိန်လွန်မှသိရတာလားရှင့်။ သူငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တာ တလဘဲခံပြီး ဆုံးသွားပါတယ်။ ရောဂာဖြစ်တာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲရှင့်။
အသည်းကင်ဆာမှာလည်း (၂) မျိုးကွဲသေးတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ တနေရာရာမှာကင်ဆာဖြစ်လို့ အသည်းကို ပြန့်လာတာမျိုးနဲ့ နောက်တမျိုးက Hepatocellular carcinoma အသည်းမှာစဖြစ်တာ။
ဘာလို့ဖြစ်သလဲ တိတိကျကျမသိကြပါ။ တချို့တော့သိပါတယ်။ Hemochromatosis နဲ့ Wilson's disease တို့လို မွေးကတည်းပါလာသူ၊ အရက်သောက်သူ၊ အသည်းရောင် ဘီ (သို့) စီကြောင့် နာတာရှည်အသည်းရောင်နေသူ၊ မျိုးရိုးအရဖြစ်တဲ့ Hemochromatosis ရောဂါရှိနေသူနဲ့ အသည်းခြောက်နေသူ၊ အသည်းအဆီများနေသူ၊ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်တွဲရင်လည်းဖြစ်သူများတယ်။ vinyl chloride နဲ့ arsenic လို ဓါတုပစ္စည်းတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်။ အပင်မှို Aflatoxins ကနေ ဂျုံ၊ မြေပဲ၊ ဆန်၊ ပျောင်းစေ့တွေကို စွဲထာတာ စားမိရင် ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ လူဝရင်၊ ဆီးချိုရှိသူ၊ L-carnitine ဓါတ် နည်းနေသူ၊ HIV/AIDS ရှိနေသူ၊ Anabolic steroid ခေါ် ကြွက်သား-ခွန်အားတိုး ဟော်မုန်းဆေး တာရှည်သုံးသူတွေ ပိုဖြစ်တယ်။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်မကဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေထက်ပိုဖြစ်တယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်လာခြင်း၊ အစာအနံ့ရတာနဲ့ ရင်ပြည့်လာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အားယုတ်လာခြင်း၊ အကြောင်းမသိဖျားခြင်း၊ ဗိုက်ညာဖက်အပေါ်ပိုင်းအောင့်ခြင်း၊ နာတာကလက်ပြင်ဆီတက်နာခြင်း၊ အသည်းကြီးလာခြင်း၊ ဘေလုံးကြီးလာခြင်း၊ ရေဖျင်းဖြစ်လာခြင်း၊ အသား-ဆီးဝါခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့လာခြင်း။
Cirrhosis liver အသည်းခြောက်ရောဂါရှိနေသူတွေမှာ Hepatoma အသည်း-အကျိတ် ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အတော်များများ ဘာမှမခံစားရဘူး။ ၆ လတခါ Serum alpha fetoprotein သွေးစစ်တာ နဲ့ Ultrasound အသည်းကို (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်တာ လုပ်နေရမယ်။ ရောဂါအဆင့်ကြည့်ကုသရမယ်။
ရောဂါဟုတ်-မဟုတ်စစ်မယ်၊ အဆင့်သတ်မှတ်မယ်။ ဘယ်လိုကုသနည်းရွေးမလည်းဆုံးဖြတ်မယ်။ လူနာ၊ ဆေးရုံအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးရွေးချယ်ရတယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဆရာဝန်၊ ကင်ဆာဆရာဝန်၊ အစာလမ်းအထူးကုဆရာဝန်၊ စတဲ့ နယ်ပယ်အလိုက် အထူးကုဆရာဝန်တွေကနေ စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ တခါတလေ နည်းတခုကမကို တွဲလုပ်ရတယ်။ လူနာအနေနဲ့လိုမယ်ထင်ရင် ဒုတိယအကြံရယူတာလုပ်နိုင်တယ်။
၁။ Surgery ခွဲစိတ်ကုသနည်းမှာ partial hepatectomy အသည်းတစိတ်တပိုင်းထုတ်ပေးတာနဲ့ liver transplant အသည်းအစားထိုးတာပါတယ်။
၂။ Tumor ablation အကျိတ်ကိုတခြားနည်းနဲ့ကျေစေနည်း၊
၃။ Tumor embolization အကျိတ်ကိုသွေးမလျှောက်စေနည်းလုပ်ပေးခြင်း၊
၄။ Radiation therapy ဓါတ်ကင်နည်း၊
၅။ Targeted therapy ပစ်မှတ်ထားကုသနည်း၊
၆။ Chemotherapy ကင်ဆာဆေးပေးနည်း၊ Sorafenib ဆေးကို နောက်ပိုင်းအဆင့် ဖြစ်သူတွေကို ပေးတယ်။
၇။ Freezing cancer cells (Cryoablation) အေးခဲနည်း၊
၈။ Heating cancer cells အပူပေးနည်း၊
၉။ Injecting alcohol into the tumor အယ်လ်ကိုဟောဆေး အကျိတ်ထဲထိုးနည်း၊
၁ဝ။ Injecting chemotherapy drugs into the liver ကင်ဆာဆေးအကျိတ်ထဲထိုးပေးနည်း၊
၁၁။ Targeted drug therapy ပစ်မှတ်ထားကုသနည်း။
အသည်းကင်ဆာဟာ အလားအလာမကောင်းတဲ့အမျိုးအစားရောဂါဖြစ်တယ်။ လူနာ ၁ဝ% ကသာ ကင်ဆာကို စောစောသိကြတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ ၃ဝ% ဟာ ရောဂါသိပြီးနောက် ၁ နှစ်အသက်ရှည်တယ်။ ၁ဝ% က ၅ နှစ်ရှင်တယ်။ တချို့နည်းနည်းပိုရှည်တယ်။ အသည်းကင်ဆာနဲ့ အသည်းခြောက်တာတွဲနေရင် ၃ လသာခံတယ်။
မြန်မာပြည်သားတွေ အသည်းကင်ဆာဘေးက ဝေးကြပါစေ။
တနိုင်ငံလုံး တမျိုးသားလုံး အတတ်ပညာသင်ကြားရေးတွင် ဘာသာခြားကို အခြေပြု၍ သင်ကြားမြဲမဟုတ်ပေ။
ရတနာသုံးပါးနှင့် တစ်ကွလို့ သင်ပေးနေသူတွေခေတ်မှာတော့့
၆။ Don't burn wood or trash အမှိုက်နဲ့ အသုံးအဆောင်ဟောင်းတွေကို မီးမရှို့ပါနဲ့။
၈။ Don't allow anyone to smoke indoors ဘယ်သူ့မှ အိမ်ထဲမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။
Pollution in Yangon ရန်ကုန် ညစ်ညမ်းမှု
ဒီပုံကို အခုတွေ့တယ်။ တမြန်နှစ်က ဧပြီလထဲမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ထိန်ပင်သုဿန်နားက ဧက ၃၀၀ ရှိတဲ့ အမှိုက်ပုံ မီးလောင်ခဲစဉ်က ရေးထားတာ။
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ အသက် ၂၂ ကျားပါ ခုတလော ရန်ကုန်မြို့မှာလေထုညစ်ညမ်းနေပါတယ် ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံမီးလောင်ပြီး ငြိမ်းမရတာ ၃ရက်ကျော်နေပြီ တမြို့လုံးမြူခိုးတွေနဲ့ညှော်နေပါတယ် အဲဒါ လေထုညစ်ညမ်းတာနဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးလေးတွေ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေအများသိအောင်ပြောပြပေးပါဆရာ အခြေအနေအရမ်းဆိုးနေလို့ပါ ဆေးရုံရောက်တဲ့လူနာတွေလည်းများလှပြီ။
၂။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီတခါတော့ ကျွန်မရဲ့ ရောဂါကို မေးမြန်းဖို့ မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ လက်ရှိ ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ အမှိုက်ပုံမှ လောင်နေသောမီးကြောင့် မြို့ထဲ လူနေထူထပ်သော ရပ်ကွက်အချို့ထိ မီးခိုးများ ပြန့်နှံလာပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ မီးခိုးငွေ့တွေ ကြာရှည် ရှုရှိုက်မိတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများနဲ့ ဘယ်လို နေထိုင် ကာကွယ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး အကြံပေးချက်လေး လိုချင်လို့ပါရှင်။
ရန်ကုန် ညစ်ညမ်းမှု နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ် မေလ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်
• Air Pollution လေထုညစ်ညမ်းမှု
88.89 = Very High အလွန်မြင့်မား
• Drinking Water Pollution and Inaccessibility သောက်ရေ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ရရှိနိုင်မှု
67.86 = High မြင့်မား
• Dissatisfaction with Garbage Disposal အမှိုက်စွန့်ပြစ်မှုအတွက် မကျေနပ်မှု
95.83 = Very High အလွန်မြင့်မား
• Dirty and Untidy = ညစ်ပေမှုနှင့် မသန့်ရှင်းမှု
75.00 = High မြင့်မား
• Noise and Light Pollution ဆူညံမှုနှင့် အလင်းရောင်ညစ်ညမ်းမှု
33.33 = Low နိမ့်
• Water Pollution ရေညစ်ညမ်းမှု
57.14 = Moderate အသင့်အတင့်
• Dissatisfaction to Spend Time in the City မြို့ထဲအချိန်ကုန်မှုအတွက် မကျေနပ်မှု
81.25 = Very High အလွန်မြင့်မား
• Dissatisfaction with Green and Parks in the City စိုစိမ်းသည့်နေရာနှင့် ပန်းခြံများအတွက် မကျေနပ်မှု
83.33 = Very High အလွန်မြင့်မား
Purity and Cleanliness in Yangon, Myanmar မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ သန့်စင်မှုနှင့် သန့်ရှင်းမှု
• Air quality လေထုအရည်အသွေး
11.11 = Very Low အလွန်နိမ့်ကျ
• Drinking Water Quality and Accessibility သောက်ရေ အရည်အသွေးနှင့် ရရှိနိုင်မှု =
32.14 = Low နိမ့်ကျ
• Garbage Disposal Satisfaction အမှိုက်စွန့်ပြစ်မှုအတွက် ကျေနပ်မှု
4.17 = Very Low အလွန်နိမ့်ကျ
• Clean and Tidy သန့်ရှင်းမှုနှင့် သပ်ယပ်မှု
25.00 = Low နိမ့်ကျ
• Quiet and No Problem with Night Lights ဆိတ်ငြိမ်မှုနှင့် ညအလင်းရရှိမှုအတွက် ပြဿနာမရှိမှု
66.67 = High မြင့်မား
• Water Quality ရေအရည်အသွေး
42.86 = Moderate အသင့်အတင့်
• Comfortable to Spend Time in the City မြို့ထဲအချိန်ကုန်ရမှုအတွက် နေသာထိုင်သာရှိမှု
18.75 = Very Low အလွန်နိမ့်ကျ
• Quality of Green and Parks စိုစိမ်းသည့်နေရာနှင့် ပန်းခြံများ အရည်အသွေး
16.67 = Very Low အလွန်နိမ့်ကျ
ရန်ကုန် ညစ်ညမ်းမှု နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ် စက်တင်္ဘာ ၂ဝ၁၇
83.00 = Very High အလွန်မြင့်မား
71.88 = High မြင့်မား
96.43 = Very High အလွန်မြင့်မား
84.09 = High မြင့်မား
40.22 = Low နိမ့်
73.86 = Moderate အသင့်အတင့်
75.00 = Very High အလွန်မြင့်မား
79.35 = Very High အလွန်မြင့်မား
17.00 = Very Low အလွန်နိမ့်ကျ
• Drinking Water Quality and Accessibility သောက်ရေ အရည်အသွေးနှင့် ရရှိနိုင်မှု
28.12 = Low နိမ့်ကျ
3.57 = Very Low အလွန်နိမ့်ကျ
15.92 = Low နိမ့်ကျ
59.78 = High မြင့်မား
26.14 = Moderate အသင့်အတင့်
25.14 = Very Low အလွန်နိမ့်ကျ
20.65 = Very Low အလွန်နိမ့်ကျ
- Poe Ei Phyu on Jul 03, 2012: မြန်မာနိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်လို့ စက်ရုံတွေမများလို့ မဆိုးပါ။ တွက်ချက်မှုတွေက မဖြစ်နိုင်ပါ။
- Burman2k on Feb 21, 2014: Air Quality Index (AQI) ကို % နဲ့မတွက်ပါ။ 0-to-500 (in USA) တွက်ပါတယ်။
- Theingi Soe on Jul 11, 2014: ရန်ကုန် Air Quality Index (AQI) ဟာ တရုပ်ပြည် (ရှန်ဟဲ) လောက် မဆိုးပါဘူး။
1. Air pollution လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ သေဆုံးမှု https://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/air-pollution.html
2. Cooking fumes ညှော်နံ့ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/cooking-fumes.html
3. Known and Probable Human Carcinogens သိထားပြီးနှင့် အလားအလာရှိတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓါတ်များ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/known-and-probable-human-carcinogens.html
4. Pollution in Yangon, Myanmar http://www.numbeo.com/pollution/city_result.jsp?country=Myanmar&city=Yangon
5. Pollution in Yangon ရန်ကုန် ညစ်ညမ်းမှု https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/pollution-in-yangon-myanmar.html
6. Pollution in Yangon ရန်ကုန် ညစ်ညမ်းမှု https://www.numbeo.com/pollution/in/Yangon
7. Volatile Organic Compounds အော်ဂဲနစ် ညှော်နံ့ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/volatile-organic-compounds.html
မြန်မာ့ လေထု မြေထု ရေထု လူထု ကျန်းမာကြပါစေသတည်း။
Loka Niti လောကနီတိနှင့် ငြင်းခုန်ခြင်း
Loka Niti (1) လောကနီတိနှင့် ငြင်းခုန်ခြင်း (၁)
• လိုခြင်တပ်မက်ရှိသောသူကို တံစိုးလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ယူရာ၏။
• မာနခက်ထန်သောသူကို လက်အုပ်ချီခြင်းဖြင့် ယူရာ၏။
• သူမိုက်ကို အလိုသို့လိုက်သဖြင့် ယူရာ၏။
• ပညာရှိကို အဟုတ်အမှန်ကို ပြောဆိုခြင်းဖြင့် ယူရာ၏။
• လိုခြင်တပ်မက်ရှိသောသူကို တံစိုးလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် လိုခြင်တပ်မက်မှုကို အားပေးရာကျ၏။
• မာနခက်ထန်သောသူကို လက်အုပ်ချီခြင်းဖြင့် အာဏာမှာ ကြာရှည်ယစ်မူးစေ၏။
• သူမိုက်ကို အလိုသို့မလိုက်ခြင်းဖြင့် ဆက်မမိုက်နိုင်တော့အောင် လုပ်ဆောင်ရာကျ၏။
• ပညာရှိစွာမဲပေးခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်ပါ ပညာရှိရာကျခဲ့လိုက်ကြ၏။
• လောက၌ မင်းတို့သည် တကြိမ်သာဆိုကုန်၏။
• ရဟန်းနှင့် ဗြာဟ္မဏတို့သည် တကြိမ်သာဆိုကုန်၏။
• ဘုရားအစရှိသော သူတော်ကောင်းတို့သည် တကြိမ်သာဆိုကုန်၏။
• ဤသို့သောတရားသည် ရှေးသူတော်ကောင်းတို့၏ အကျင့်တည်း။
• မြန်မာပြည်၌ အစိုးရတို့သည် ငါးနှစ်တကြိမ်သာဆိုကုန်၏။
• မတူသောဘုန်းကြီးတို့သည် မတူသောတရားတို့ကို ဟောကြားကြကုန်၏။
• တိုင်းသူပြည်သားတို့သည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆိုကြကုန်၏။
• ဤသို့သောတရားသည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျင့်တည်း။
• ရဟန်းသည် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ ပျက်၏။
• ဘုရင်မင်းသည် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ ပျက်၏။
• ပြည့်တန်ဆာမသည် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ ပျက်၏။
• အမျိုးကောင်းသမီးသည် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ ပျက်၏။
• ရဟန်းသည် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ သာသနာပျက်၏။
• အစိုးရသည် တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ ပြုတ်ကျ၏။
• ပြည့်တန်ဆာမသည် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ တိုင်ပြည်ဂုဏ်ပျက်၏။
• အမျိုးကောင်းသမီးသည် ရောင့်ရဲမှုကင်းမူ မျိုးဆက်ပျက်၏။
စည်သည်တီးမှ မြည်သကဲ့သို့ ပညာရှိသည်လည်း သူမေးလာသောအခါမှသာ ဖြေကြားပြောဆိုလေ့ရှိ၏။
သူမိုက်သည်ကား သူတပါးမေးသည်ဖြစ်စေ မမေးသည်ဖြစ်စေ လွန်မင်းစွာ ပြောဟောတတ်ပေသည်။
မေးလာသောအခါတိုင်း မဖြေ၊ မေးနည်းစည်းကမ်းကျမှသာဖြေသော ကျွန်ုပ်အား ပညာရှိဟုမခေါ်ထိုက်။
သူတပါးမေးသည်ဖြစ်စေ မမေးသည်ဖြစ်စေ ဆေးပညာစာတွေရေးနေသော ကျွန်ုပ်သည် သူမိုက်တော့မဟုတ်။
တေးရေး - ရဲဘော်တင်ကိုး
ဆို - ကိုမြကြီး
အိုးဝေအစစ်ခေတ်က မြန်မာစာ သတ်ပုံအစစ်ကို တင်ပြပါတယ်။
အိုးဝေအတု ဒေါင်းအတုခေတ်မှာ မြန်မာစာလည်း အတုဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာစာ တခေတ်ပြန်ပြောင်းလာပါစေသတည်း။
Photos from Min Swe Hnit ကျေးဇူး။
Page စာမျက်နှာ မကောင်းလှပါ
ဆရာခင်ဗျာ page က ပျက်သွားတာလား ဆရာရဲ့post တွေအရင်ဆိုမနက် ည အမြဲတွေ့နေရတယ် အခုမတွေ့ရလို့ ရှာကြည့်တာ like 140,000 ကျော်နဲ့ မြန်မာနာမည်နဲ့ Page တခုတွေ့တယ် အတုထင်လို့ Like မလုပ်ခဲ့ဘူး
ဟုတ်။ ကျွန်တော့်အမည် ကျွန်တော့်ဓါတ်ပုံနဲ့ အတုတွေရှိတယ်လို့ ပြောလာကြတယ်။ အဲဒီမှာ အမေး-အဖြေတွေလည်း လုပ်နေသတဲ့။
ကျွန်တော့်အစစ်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်စပြီး အဆင်မပြေတော့ပါ။ Dr. Tint Swe https://www.facebook.com/drtintswe/?sw_fnr_id=979232012&fnr_t=0 စာမျက်နှာမှာ D ဒီ သည် အဲတာ အဲဒါ အဲ့ ပို့စ်ကကစပြီး 1 person reached သာတွေ့ရတယ်။ အဲတာအရင် KG Politics သူငယ်တန်း ပြန်ဆင်းရခြင်း မှာ 7,542 people reached ရှိခဲ့ပါတယ်။ မေးခွန်းကို ဖြေတာတိုင်း This person isn't available right now. လို့သာပေါ်တော့တယ်။
အဲတာနဲ့ April9at 9:03pm · အချိန်မှာ Page ပျက်နေလို့တင်လိုက်ပါတယ်။ ပေ့ခ်ျ အသစ်တခု Health and Knowledge Writings https://www.facebook.com/Health-and-Knowledge-Writings-183401575792494/ ကို April9at 9:10pm · အချိန်မှာလုပ်လိုက်တယ်။
• စစ်သူကြီးနှင့် သားနှစ်ယောက် 18,766 people reached
• ဥမ္မာဒန္တီပျို့ 12,956 people reached
• တစ် သမိုင်း သံခိပ် 17,511 people reached
• How to live with Hepatitis C positive person စီပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေရသူတွေ 17,879 people reached
• Advice for Water festival သင်္ကြန်တွင်းကျ ယူကျုံးမရမဖြစ်ရအောင် 23,141 people reached
• Water in ear သင်္ကြန်နား 29,390 people reached
ကျွန်တော့်အမည်မပါတာ သတိမထားမိလိုက်ပါ။ အဲတာနဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ စာမျက်နှာသစ် Page လုပ်ရပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးအသစ်မှာ
• အင်ဒီယာနာ အိုင်းကလင်းနစ် 478 people reached
• ကော်ဖီ မသောက်ရသေး 485 people reached
• ဖိုးသူတော်အိမ် 675 people reached
• ကွိ 539 people reached
Health and Knowledge Writings ကိုပဲသုံးရမလား၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ စာမျက်နှာသစ်သုံးရမလား မသိသေး။ တင်စရာနေရာတွေများတာ မကောင်းပါ။ မနိုင်ပါ။ Tint Swe အမည်နဲ့ အီးမေးလ်မတူတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်က ၂ ခုနဲ့ ဘလော့ကတခုရှိသေးတာ။
သည်အတိုင်းတော့ မစွန်သေးပါ။ Inbox ထဲမှာ မေးခွန်း ၄-၅ ခုသာရနေတယ်။ မေးခွန်းမေးသူတွေ အဆင်ပြေစေချင်တယ်။
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ရေးသာတဲ့ သံဝရပျို့ အပိုဒ် (၃၉) ဖြစ်ပါတယ်။ သံဝရမင်းသားငယ်ဟာ ရှေးစကားပုံပြင်တွေကို နားထောင်လို့မဝနိုင်ကြောင်း ဖွဲ့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုခေတ်မှာတော့ တချို့က ရှေးကတည်းအမှန်ရေးသားခဲ့တဲ့ မြန်မာစာသတ်ပုံတွေကို နားခါးနေကြသတဲ့။ မြင့်သွန်းတစ်ရာလို့ ရေးနေကြတယ်။ တစ်ကြိမ်ကြားကလို့ ရေးနေကြတယ်။ ဆုံးမ မကြိုက် လူတသိုက်တည့်။
Complications of appendicitis အူအတက်ရောင်တာ ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်သလဲ -
ဆွီဒင် သုတေသနတခုအရ -
Flowering Dogwood ဒီမှာ ပွင့်နေတဲ့ပန်း
နာမည်က ဆန်းတယ်။ တချို့က ချယ်ရီမှတ်နေကြတယ်။ Cornus florida လို့လည်းခေါ်တယ်။ Flowering Dogwood လို့ မှတ်ရတာက လွယ်တယ်။ Cherokee Princess Flowering Dogwood လို့လည်းခေါ်တယ်။ Cherokee ဆိုတာ ဌာနေအင်ဒီယန်းလူမျိုး။
Toast ဘိုစာ မနက်စာ
တခြားနိုင်ငံတခုမှာနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းက စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ တင်ထားတယ်။ သူ့ဆီမှာက နေ့လယ်စာ။
ကျွန်တော့မှာ ကော်ဖီနဲ့ ပေါင်မုံ့မီးကင်။ ဘိုဆန်တယ်တော့ မထင်နဲ့။ စာရေးရင် လက်တဖက်တည်းနဲ့ ပြီးနိုင်တာ။ အီးမေးလ်က မေးတာတွေနဲ့ မက်ဆင်ဂျာမေးတာတွေ ဖြေပြီးသွားပြီ။ ပေါင်မုံ့ကုန်ပြီ။
ရေနွေးတအိုးတည်ရတယ်။ ကော်ဖီတဝက် ကျန်သေးတယ်။ မက်ဆေ့ကလာတာတွေ ဖြေရဦးမယ်။ မက်ဆင်ဂျာက ထပ်လာနေတာလည်း မြင်နေရတယ်။
39 ၃၉ နှစ်
မင်္ဂလာပါ ဘဘဆရာ တားရဲ့ ကောင်းမလေးက အသက် ၃၉ရှိပါပြီ ရာသီမလာဘူးဖြစ်နေတယ် ဘာကြောင့်ပါလဲဆရာ
သားလို့ရေးချင်တာကို တား၊ ကောင်မလေးလို့ရေးချင်တာကို ကောင်းမလေးလို့ရေးတာတော့ ဗွေမယူလိုပါ။ ထပ်ခါထပ်ခါ ပို့နေရတဲ့ အဘရောဂါစာပို့လိုက်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်လေးမှာ ရေးလိုတာက ကောင်မလေး။ အသက် (၃၉) နှစ်။
အဲလိုပဲ သမီးကောင်လေးလို့လည်းရေးကြတာ ခဏခဏလာတယ်။ သမီးကောင်လေးလည်း (၃၉) နှစ်ပဲလား မသိ။ အဲလိုသာဆိုရင် သမီးဆိုသူက့့ နှစ်လောက်နေမယ်။
ဆရာ သတ်ပုံကျမ်းမှာ တစ်စုံတစ်ရာလို့ဘဲ တွေ့တယ်ဆရာ။ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ နဲ့ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ အမြဲ ညွှန်ပြပေးတဲ့ဆရာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သတ်ပုံကျမ်းဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလို တခုတည်းသာရှိရတာ မဟုတ်ပါ။ အသစ်ရေးလို့ အဟောင်းဖျက်ရတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ သတ်ပုံစာအုပ် ၄ အုပ်ရှိနေတယ်။ သားတယောက်အခန်းထဲမှာ ရှိသေးတယ်။ သားတယောက်ရဲ့ စာကြည့်တိုက်မှာလည်း ရှိသေးတယ်။ မတူတဲ့ သတ်ပုံကျမ်းတွေပါ။ အားလုံးက အသုံးကျတယ်။
ကနေ့ သားတယောက်က ဗရာကြော် ကြော်တယ်။ အတော်ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က အိန္ဒိယမှာ ၂၄ နှစ်သာကြာခဲ့တာ အဲဒီကအစားအသောက်တွေကို မခုံမင်ပါ။ မယ်ဆလာဆို ရှောင်ပြေးချင်တယ်။ တောင်ပိုင်းအစားအသောက်တော့ အတော်များများစားလို့ရတယ်။ ဗရာကြော်လည်းပါတယ်။
နောက်သားတယောက်လည်း သူ့အိပ်မှာ ထမင်းကြော်သတဲ့။ ကြာသတဲ့။ အဲတာ သူ့ဖရင်းတယောက်ကနေ အားပေးတယ်။ လူကတော်ပြီး ဒယ်ကညံ့လိုနေမယ်တဲ့။
ကျွန်တော် မြို့သာမှာနေရတုန်းက မန္တလေးကိုသွားရတော့ အန်တီအေးက အိမ်ဖေါ်မလေးကို ခရမ်းသီးချက်ထားနှင့်လို့ မှာထားခဲ့တယ်။ ပြန်ရောက်တော့ ဟဲ့့ ရွှေစုံ့့ ခရမ်းသီးကို ဘာနဲ့ချက်သလဲမေးတယ်။ ဒယ်အိုးနဲ့ချက်တယ်ရှင့်တဲ့။
မရွှေစုံက စကားယဉ်ကျေးတယ်။ မေးခွန်းကိုလည်း အတည့်ဖြေတတ်တယ်။
သာဓုရေးတဲ့ဝတ္ထုကိုရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်အကြောင်းရေးမှာ မဟုတ်ပါ။ ဧည့်သည်လုပ်ရရင် နေရာရော အစားအသောက်ပါ ရွေးသင့်ကြတယ်။
တွေ့ချင်သူ တွေ့ချင်သူတွေနဲ့ စကားပြောစရာ နေရာကောင်းလိုတယ်။ သူ့အိမ် ကိုယ့်အိမ်မှာ အဆင်ပြေတာလည်းရှိ။ တခြားနေရာသွားတွေ့တာမျိုးက ပိုအဆင်ပြောတာမျိုးလည်းရှိတယ်။
ပရိသတ်များရင် စကားလည်း ရွေးရတယ်။ ပရိသတ်ဆိုတာက အမျိုးမျိုး။ စကားကုန်ပြောမရတာ ရှိတတ်တယ်။ တချို့ကတော့ ဘယ်သူရှိနေနေ များလေကြိုက်လေ၊ ပြောတာလည်း ကျယ်လောင်လေ။ ကိုယ်ရည်သွေးချင်သူတွေ။
အရွယ်အရ ရွေးရတာက အစားအစာ။ ဆိုင်စာတွေက အဆင်မပြေတာများတယ်။ ငန်တာတွေ၊ ဟင်းချိုမှုန့် အသားမှုန့် ပါတာတွေ။ စားစရာများပေမဲ့ ရှားပြီ။ စားချင်တာ မေးပြောထားပြီး ချက်ကျွေးတာက ကောင်းတယ်။ အားမနာရတဲ့ အိမ်ရှင်မှသာ ဖြစ်တယ်။ ဂျီးများတဲ့ ဧည့်သည်။
စားသောက်ဆိုင်မှာ တင့်တယ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံကုန်တယ်။ ဂုဏ်တက်တယ်။
လူချင်းမတွေ့ဖူးတဲ့ဖရင်းကို အထင်တကြီးနဲ့ ကြိုဆိုဧည့်ဝတ်ပြုတော့ ပက်ပင်းတွေ့မှ ဖွတ်သာသာလို့ သိတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်။ ဆောရီး။ Smile!
နွေးထွေးမှုကတော့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာစားရစားရ လိုတယ်။ ဧည့်သည်မှာက ကံပါမှ။ အိမ်ရှင်နဲ့လည်း ရေစက်ပါမှ။
TB Medicines Side Effects တီဘီဆေးတွေနဲ့ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ
၁။ သမီးနာမည့့် ပါ အသက်က ၃၃ပါ နေတာက စမ်းချောင်းရန်ကုန်ပါ သမီးရောဂါစဖြစ်တာက လည်ပင်းဘေးမှာ အကျိတ်စဖြစ်တာပါ ဆေးခန်းပြ ဆီးစစ် သွေးစစ် ဓာတ်မှန်ရိုက် အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပါတယ် အဖြေမထွက်ပါဘူး နောက်ဆုံး ခွဲပြီး အသားစကိုစစ်တော့မှ TV လို့ အဖြေထွက်လာပါတယ် အခုလက်ရှိသမီး TV ဆေးသောက်နေပါတယ် ဆေးသောက်နေရင်းက ခြေလက်တွေဖောလာလို့ပါ သမီးဆေးသောက်တာ ၁လခွဲရှိပါပြီ သမီးနဲ့ TV ဆေးနဲ့မတဲ့တာလား TV ဆေးသောက်ရင် ဖောတတ်တာလား မသိလို့ပါရှင့် သမီးစာထဲမှာ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပြီးပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရှင့်
အရင် ၆ နှစ်ကတယောက်နဲ့ အခုနောက်တယောက်ကမေးပါတယ်။ TB လို့ ရေးရတယ်။ မေးခွန်းမှာ လူအမည် မလိုအပ်ပါ။
၂။ TB ဆေး စသောက်နေရပါပြီ။ TB ဆေးစသောက်ပြီးနေ့တွင် နှုတ်ခမ်းများတုန်ခြင်း။ ခန္ဓာကိုယ်တုန်ခြင်း။ ဆီးမှာ ပန်းရောင်ဖြစ်နေခြင်း။ ခန္ဓာကိုယ်လေးလံနေခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အဲ့ဒါများသည် ပုံမှန်လက္ခဏာများလားဟု သိချင်ပါသည်။ တခြား မည်သည့်ခံစားချက်များ၊ လက္ခဏာများ ဖြစ်နိုင်ပါသေးသနည်း။ ယင်းလက္ခဏာများကို ဘယ်နှစ်လ ခံစားရပါမည်နည်း။ TB ဆေးကို ၆ လ (သို့) ၉ လ သောက်ရမည်ဟု ပြောပါသည်။
TB တီဘီရောဂါဟာ သူ့အလိုလို မပျောက်ပါ။ ဆေးမကုဘဲနေရင် ရောဂါနဲ့ သေဆုံးနိုင်တယ်။ ဆေးကို မှန်မှန် မသောက်ရင်လဲ သက်သာယုံတော့ ရှိမယ်၊ ရောဂါပြန်ဖြစ်ပြီး ဆေးကုဘို့ မလွယ်တာဖြစ်လာမယ်။ တီဘီရောဂါကို ပိုးသေဆေးတွေ တမျိုးမက သုံးရတယ်။ တီဘီပိုးကနေ ဆေးမယဉ်စေဘို့ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆ လကနေ ၉ လ အထိပေးရတာများပြီး တချို့ကို ၁၂ လအထိ ပေးရတယ်။ တီဘီဆေးတွေဟာ တခြား ဆေးတွေနဲ့စာရင် စိတ်ချရတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေတော့ သေခြာပေါက်ရှိပါတယ်။ တချို့က သာမန်ဖြစ်ပြီး တချို့ကတော့ ပိုဆိုးတယ်။ အရေးကြီးတာက ဆေးတွေက တကယ်စွမ်းပါတယ်။ Streptomycin, Ethambutol, Pyrazinamide, Rifampin နဲ့ Isoniazid (INH) ဆေးတွေကို အများဆုံး သုံးတယ်။
• ကိုယ်ပူမယ်၊ (၃ ရက်မကဖျားနိုင်တယ်)
• လက်ချောင်း-ခြေချောင်းတွေ နဲ့ ပါးစပ်နေရာတဝှိုက်မှာ ကျင်မယ်၊ ထုံမယ်၊
• အရေပြားမှာ အနီစက်တွေပေါ်မယ်၊
• မျက်စိကြည့်ရတာ မကောင်းဖြစ်မယ်၊
• နားထဲ အသံတွေမည်နေမယ်၊ နားအကြားမကောင်းဖြစ်လာမယ်။
• ဆီး၊ တံတွေး နဲ့ မျက်ရည်တွေ ဝါမယ်။ ကိုယ်အတွင်းထဲက အရည်တွေလဲ ဝါနေမယ်၊
• နေရာင်ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဖြစ်မယ်၊ Sunscreen သုံးပါ။
• Rifampin ဆေးနဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေး တွဲသောက်ရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်တား-အရေပြားအောက် ထားရတဲ့ဆေးချောင်း သုံးရင် ကိုယ်ဝန်တားစေတဲ့အစွမ်း နည်းစေမယ်။ Rifampin ဆေးနဲ့ Methadone ဆေး တွဲသောက်ရင် ဆေးဖြတ်လက္ခဏာတွေ ပိုများစေတယ်။ Rifampin ကနေလဲ အသဲကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဝါတာတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အရက်မသောက်ရတာဖြစ်တယ်။
• Streptomycin ထိုးဆေးက Ototoxicity နားကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ ကျောက်ကပ် သိပ်မကောင်းရင် သိတာမယ်။ နားထဲမှာ အသံတဝီဝီ မည်နေမယ်။ ဆီးနည်းမယ်။ ဆီးထဲမှာ အနယ်ပါတတ်တယ်။ အရေပြား အနီစက်တွေ ထွက်နိုင်တယ်။ ဆေးဖြတ်ရင် ပြန်ကောင်းပါတယ်။
• Ethambutol ကနေ မျက်စိကို ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ Optic neuritis ခေါ်တယ်။ ဆေးဖြတ်ရင် ပြန်ကောင်းပါတယ်။ အဖျားပိုင်းနေတဲ့ အာရုံကြောတွေထိခိုက်လို့ ထုံတာ-ကျင်တာဖြစ်မယ်။
• Pyrazinamide ကနေလဲ အသဲကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ အဆစ်နဲ့ ကြွက်သားတွေနာမယ်။ ဆိုးလှတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဂေါက်ရောဂါ ရှိရင်တော့ ပိုဆိုးနိုင်တယ်။
• Isoniazid ကနေလဲ အသဲကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဝါတာတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အရက်မသောက်ရတာဖြစ်တယ်။
ဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုနဲ့ ရောဂါကို ချိန်ဆရတယ်။ စမ်းသပ်ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ညွှန်မှသာ ဆေးသောက်မယ်။ ဆေးဖြတ်မယ်။ ဆေးပြောင်းမယ် လုပ်ရပါမယ်။ ဆေးသောက်တာစနစ်မကျရင် ဆေးယဉ်တီဘီ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆောရီး။
5. Intestinal Tuberculosis အူ တီဘီhttp://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/01/intestinal-tuberculosis.html
9. Pleural effusion အဆုပ်အိတ်ထဲ အရည်အောင်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/pleural-effusion.html
11. RDT ငှက်ဖျား အမြန်စစ်ဆေးနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/rdt.html
12. TB (Tuberculosis) တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2008/10/tuberculosis-tb.html
13. TB Medicines Side Effects တီဘီဆေးတွေ နဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/side-effects-of-tb-medicines.html
14. TB No more in Medical Curriculum ဆရာဝန်တွေကို တီဘီ သင်မပေးကြတော့တာ စိုးရိမ်စရာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/10/tb-no-more-in-medical-curriculum.html
15. TB Q and A တီဘီအမေး-အဖြေ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/09/tb-q-and.html
16. TB Q and A တီဘီအမေးအဖြေ (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/01/tb-questions.html
18. TB Signs & Symptoms တီဘီရောဂါလက္ခဏာများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/tb-signs-symptoms.html
19. TB Treat the root cause အခြေအမြစ်ကို မသတ်နိုင်သရွေ့ မပျောက်ပါ
20. TB အသစ်လား အဟောင်းလား http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/05/tb.html
21. Tuberculin test တီဘီအတွက် (ကြူဘာကူလင် တက်စ်)http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/10/tuberculin-test.html
၁။ ဆရာရှင့် ချင် နှင့် ခြင် တို့ရဲ့ သုံးစွဲပုံကိုလည်း အဆင်သင့်လျှင် ရေးသားပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါရှင့်။ စတုတ္ထတန်းသိပ္ပံ အခန်း ၄ သင်တဲ့အခါမှာ ချင်တွယ်ဖန်တိုင် နဲ့ ခြင်တွယ်ဖန်တိုင်ဆိုပြီး၊ ၂ မျိုးတွေ့နေရပါတယ်။ ပုံနှိပ်မှာပါ။ အဲဒါ ဘယ်ဟာအမှန်ပါလဲဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပါ။ (ခြင်တွယ်ဖန်တိုင်ကသာ မှန်ပါမယ်။)
၃။ ဆရာ ကျမကစားခြင်တယ်လို့ရေးမိတယ် အခြားလူတွေက စားချင်တယ်လို့ ရေးပါတယ်။ ကျမရေးတာ မှားနေပါသလားဆရာ။ နောက်ပြီး ချင် နဲ့ ခြင်ကိုလည်းမှားကြတယ်ဆရာ။ စားခြင်လိုက်တာ အဲ့ဒီလိုရေးကြတယ်။ ချင် နဲ့ ခြင်သုံးစွဲပုံကို တင်ပေးလိုက်ပါဦးဆရာ။
• ခြင်ပုန်း၊ ခြင်ကောင်၊ ခြင်ကိုက်
• ကချင်ရက် လက်ကျိုး
• ချည်ပုဆိုးက ပိုးပေါင်းချင်
• ငိုချင်ရက် လက်တို့
• ထမင်းကြမ်းက အငွေ့ထွက်ချင်
• မည်းမည်းမြင်ရာ ငါ့ယောက္ခမထန်းတော မလုပ်ချင်နဲ့
• လာချင်ရင်အနီးလေး မလာချင်ရင်ခရီးဝေး
• သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း
၂၃-၆-၂ဝ၁၃ နေ့က စီအိုင်အေဝန်ထမ်းဟောင်း စနိုဒင်ရဲ့ ဖွင့်ချချက်ကိုကြည့်ရင် အမေရိကန်အစိုးရဟာ သူ့တိုင်းပြည် ကာကွယ်ဖို့ အစွန်းရောက်တွေကို NSA, CIA, FBI, DHS တို့က ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်နေတာ၊ လူမသိသူမသိ ဗျင်းနေတာ ကြာပြီတဲ့။ အမေရိကန်နိုင်ငံဥပဒေအရခက်လို့ ဂွါတာနာမိုတို့၊ တခြားနိုင်ငံတို့က ထောင်တွေမှာ ထားပြီး ဆော်တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အများမြင်ကွင်းမှာတော့ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးတွေကို ပါးပါးနပ်နပ် ကြွေးကြော်နေတာ အားလုံးအသိဖြစ်တယ်တဲ့။ အင်္ဂလန်၊ ရုရှား၊ ပြင်သစ်တို့ကလည်း အဲသလို လုပ်နေတာဘဲ။ ဦးနှောက်ရှိတဲ့အစိုးရတိုင်း၊ တိုင်းပြည်အကျိုးကို တကယ်လိုလားတဲ့ အစိုးရတိုင်း ဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်တဲ့။
မှတ်မိသေးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းခေတ်တုန်းကပေါ့။ ခေတ်က စစ်အေးကာလ၊ ဗီယက်နမ်စစ်ကြီးဖြစ်နေစဉ်ကပါ။ အမေရိန်ကန်ကနေ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး လမ်းမကြီးဖေါက်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအခါ ဆိုဗီယက်ယူနီယံကနေ အဲဒီလမ်းမကြီးအလယ်မှာ သစ်ပင်တွေစိုက်ပေးမယ်လို့ စေတနာကောင်းခဲ့တယ်။ လမ်းဖေါက်တာကောင်းတယ်။ ပတ်ဝန်ကျင်စိမ်းစိုတာကောင်းလို့ ပြောချင်ကြပါသလား။ လက်ယာနဲ့ လက်ဝဲပါ နှစ်နိုင်လုံးက အကြံသမားချည်းပါ။ အမေရိကန်ဘ ဘီတူးဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေ ဆင်းနိုင်လောက်အောင်ကျယ်တဲ့ လမ်းမကြီးလုပ်ချင်တာ။ ဆိုဗီယက်က လေယာဉ်ဆင်းမရအောင် ဒီအကြံကိုဖျက်ချင်တာ။ အဲဒီခေတ်က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတွေ ခေတ်မစားသေးပါ။
သီ အားကလီး အမေရိကန်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ရှိတယ်။ တီဗွီဆီးရီးစ်လည်းရှိတယ်။ စာအုပ်ပဲ ငယ်ငယ်ကဖတ်ဘူးပါတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ အမေရိကန်ကနေ ဆန်တွေဝေပါတယ်။ ဆိုဗီယက်က အဲဒီဆန်အိတ်တွေမှာ သူတို့တံဆိပ် ကပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီခေတ်ကတည်းက ဝါဒဖြန်ချိရေးမှာ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ကြတယ်။ အခုထိ။ နောင်ကာလရောပါ။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ရန်ကုန်ရှိတဲ့သံရုံးတွေကစာအုပ်တွေ မှာဖတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သံရုံးအစုံကနေ မှာတယ်။ ယူအက်စ်၊ ယူကေ၊ အနောက်ဂျာမဏီက စာအုပ်တွေဟာ ကြွေစာရွက်တွေ၊ အရောင်စုံတွေနဲ့ချည်း။ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဆိုဗီယက်နဲ့ ချက်ကိုဆလိုဗက်၊ တရုပ်ကနေလည်း မှာတာပဲ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဘက်မလိုက်အစစ်။ အဲဒီကာလမှာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကတော့ လက်ဝဲဘက်ကို အတော်ယိမ်းနေပြီ။ လက်ဝဲစာမဖတ်သူ အရင်းရှင်နဲ့ ပေးစားခံရတယ်။ ဖဆပလရော၊ ဦးနေဝင်းပါ မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဆန့်ကျင်ရေးတွေ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ကြတယ်။ လူငယ်တွေက ဟိုဘက်၊ သည်ဘက် ရောက်သွားကြတယ်။ အနီတွေကများပါတယ်။
ဘယ်လက်နက်ကိုဖြစ်ြဖစ် အသုံးပြုသူရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ နှလုံးသားမပါရင်တော့ စက်ရုပ်ပဲ။ သံရုံးမှန်သမျှကနေဝေတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ နှလုံးကောင်းဆေးမပါ။ မြန်မာလူမျိုး အများစုက နှလုံးကောင်းကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ပါကောင်းကြစေချင်တယ်။ အဲတာက ကျည်ဆန်မထွက်ပါ။ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေထွက်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ရှိတဲ့လူထု ရှိစေချင်တယ်။ အပြင်ကအရောင်တွေကို အားကျလွန်းသူတွေများတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်အရောင်တွေလင်းလက်စေချင်တာ။
အမည်ရယ်ကြီးပါတဲ့၊ ဇနီးရယ်ပျော်လို၊ ဖျဉ်းနားတိုတွင်၊ ချဉ်ပေါင်ညိုပေါ်စဖူးရယ်နှင့်၊ ငါးလူးငယ် မျှင်မျှင်၊ ကြေးမသင် ရေလုံပြုတ်ပါလို့၊ အင်ကုပ်ကယ် ကျယ်ကျယ်နှင့်၊ မင်းဖွယ် စိုးရ လောက်ပေလေး။
လယ်ထွန်ပြန်တွင်၊ နွားကန်ပစ်ချ၊ ဆာမွတ်ချိန်ကျသောကြောင့်၊ ဆံစလိပ်ခွေ၊ ဖါးလျားဝေနှင့်၊ အိမ်နေသူ့သက်ပန်၊ ချက်ပြောင်းဆန်ကို၊ တပန်းကန်ကုန်အောင်၊ တက်တက်သာပြောင်တော့၊ ကိုတောင်သူ့အနေ၊ ပိုတ်ဝမ်းရေ ပတ်လည်ကျရယ်နှင့်၊ ယဉ်လှတယ်လေး။
ဦးဆောင်းရေးသားတဲ့ လွမ်းချင်းမှာ လယ်ထွန်ပြန်သူဟာ တပန်းကန်ကုန်အောင်စားပါတယ်။ တစ်ပန်းကန်ရယ်လို့ မြန်မာစာမှာ မရှိခဲ့ကြောင်းပါ။
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး လိင်ကျွန်ပြုမှုနဲ့ တရားရုံးရောက်
ကနေ့ထွက်တဲ့ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ Nxivm ခေါ်တဲ့ ကိုယ်တိုင်ကူညီရေးလူမှုရေးဂရုမှာ ပါသူတွေတချို့ အဖမ်းခံထားရတယ်။ သူတို့ဟာ ဆက်သွယ်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေကို လိင်ကျွန်ပြု အစီအစဉ်မှာ အသုံးချခဲ့တယ်လို့ စွဲဆိုခံရပါတယ်။ မြေအောက်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်။
တယောက်ကတော့ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး အယ်လစ်ဆန် မာ့ခ်ဟာ Smallville and Wilfred ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ လူကုန်ကူးမှုနောက်မှာပေါ်လာတဲ့ လိင်ကုန်ကူးခြင်းဖြစ်တယ်။ အဓမ္မစေခိုင်းမှုလည်းမြောက်တယ်။
Nxivm ဝဘ်ဆိုက်ထိပ်မှာ Keith Raniere ရှိတယ်။ သူ့အောက်မှာ အဆင့်ဆင့်ရှိလို့ ပိရမဒ်လို့ခေါ်တယ်။ ထိပ်ကလူကို ပြီးခဲ့တဲ့လက မက်ဆီကိုမှာ ဖမ်းထားပြီးပြီ။ သိမ်းသွင်းရယူနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို DOS ခေါ်အစီအစဉ်ထဲမှာ လိင်ကျွန်လို စေခိုင်းပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုသုံးပြီး အုပ်စုတွေဖွဲကြတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကြတာရှိသလို အခုလို မတရားမှု ရာဇဝတ်မှုအတွက်လည်းလုပ်ကြတယ် မပေါ်သေးတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် ကျန်းမာရေးဂရု ခေါ် အုပ်စုတွေထဲက အဆီအငေါ်မတည့်တာတွေ မေးတိုင်းဖြေနေရပါတယ်။ ဟိုရောဂါ ဟိုဟာနဲ့မတည့် ပြောကြတယ်။ ဒီရောဂါ ဒါနဲ့ပျောက် ပြောကြတယ်။ အမှားတွေများတယ်။ ဂရုဆိုရင် လန့်နေရတယ်။ ဟိုဟာစားရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်မယ်။ သည်ဟာစားရင်ကိုယ်ဝန်ရမယ်ပြောတဲ့ ဂရုတခုကို လေဥဂရုလို့ ငေါ့မိတယ်။ ဆောရီး။
ကျွန်တော့်ပေ့ခ်ျကို ဂရုလုပ်ပါလားလို့ အကြံပေးတယ်။ ကောင်းတာကိုညွှန်တာဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဂရုဆိုရင် လန့်နေတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ် အကောင့်တခုမှာ ဖရင်း ၅ဝဝဝ ထားလို့ရတယ်။ ကျွန်တော့်စာရင်းထဲက ဘလောလုပ်ရသူ ၄ဝဝ ကျော်ပြီ။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ မသိ။ ဘယ်လိုလူစားမသိ။ အမည်ရင်းမဟုတ်သူတွေကများပြီး ပုံအတုတွေကလည်းများတယ်။
နိုင်ငံရေးထဲမှာလည်း အဲလိုပါပဲ။ အဆင်မပြေတာတွေ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာရှိတယ်။ တချိန်က သွေးသောက်လိုနေခဲ့ပြီးမှ ရန်သူဖြစ်တာလည်း ကိုယ်တွေ့။ ဂရုဆိုရင် လန့်နေရတယ်။
တယုတ် ဆိုပြီး သတ်ပုံ အသစ်နဲ့ ရေးရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။😁
စာထဲမှာ ပါရှိ။ စာလုံးတွေ ဝေါဟာရတွေကို နိုင်ငံရေးလုပ်တာ ဘာမှ အကျိုးမများပါ။
တို့ဗမာအစည်းအရုံးက လွတ်လပ်ရေးအတွက် အားဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲတာကို ဒို့မြန်မာလုပ်နေကြတယ်။
ပြည်သူ့ဆိုတဲ့ နာမဝိသေသနတပ်တော့ ဘယ်ပြည်သူပြည်သားမှ မကောင်းစားခဲ့ပါ။ ဦးကြီးလို့ ကင်ပွန်းတပ်ခံရသူတွေ ဂျုံမသွင်းနိုင်လို့ အဖမ်းခံရတယ်။ ကျွန်တော့်အမျိုးတွေလည်းပါတယ်။
ဗမာနဲ့ မြန်မာ ဘာထူးလို့လဲ။
မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာလုပ်လို့ ဘာတိုးတက်လာသလဲ။ နာမ်နဲ့ နာမဝိသေန ရောထွေးနေတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ ကံ ခေါ် အပြုခံရသူ။ ကျွန်။ ကန်တော့ပါ။ ဆောရီး။
ကျွန်မုန်းလို့ ကျွန်တော်မသုံးတာနဲ့ သခင်ဖြစ်မသွားပါ။
ဆရာတင်မိုးက ပန်းလေးတပွင့်လို့ ရေးတယ်။ ဆရာဝင်းဖေက အမှန်တကယ်လို့ရေးတယ်။
ဆရာတင်မိုးနဲ့ ဆရာဝင်းဖေတို့ထက် မြန်မာစာသာသူတွေကတော့့
China တရုပ် နှင့် တရုတ်
၁။ တရုပ်လား တရုတ်လားဆရာ။
၂။ ဆရာ လေးစားစွာဖြင့် စာရေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာရဲ့ ဂေဇက်မှာရေးပို့တဲ့ ဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက China ကို မြန်မာလို တရုပ်လို့ရေးရမလား သို့မဟုတ် တရုတ် လို့ ရေးရမှာလားခင်ဗျာ။ အစဉ်လေးစားလျှက်။
တိုင်းပြည်အမည်၊ လူအမည်တွေကိုရေးရင် သတ်ပုံရယ်လို့ အတိအကျပြောရတာ ခက်တယ်။ အစဉ်အလာရေးခဲ့တာကသာ ပိုသင့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်ထုတ် ကဝိဓဇသတ်ပုံစာအုပ်နဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးမကြာခင်မှာ ထုတ်တဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ တရုပ်လို့သာ ရေးပါတယ်။ မနှစ်သက်လို့ဆိုပြီး တယုတ်ရေးတာကတော့ သတ်ပုံစာရင်းမဝင်ပါ။
တခြားဘာသာစကားကို မြန်မာလိုပြန်ရင်လည်း စံရယ်လို့ပြောဘို့ ခက်တယ်။ ဥပမာ ပဌမဆုံး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ယုဒသန် ခေါ် ဂျဒ်ဆန်ကပြုစုတာမှာ အင်္ဂလိတ်-မြမ္မာလို့ရေးတယ်။ တချို့ ယုဒဿန်လို့ထောက်ပြတယ်။ အဲတာ မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအဘိဓာန်မှာ တရုပ်ပြည်။ တရုပ်ပြည်၌လုပ်သော ကြွေပုကန်လို့ရေးထားပါတယ်။
Health Articles ကျန်းမာရေးစာတိုင်း ဆရာဝန်ရေးတာ မဟု...
TB Medicines Side Effects တီဘီဆေးတွေနဲ့ ဘေးထွက်သက်...
Allison Mack arrested for alleged role in sex traf...
Proluton Depot ကိုယ်ဝန်မြဲဆေး
Clobetamil G cream ကော်တီဇုန်းလိမ်းဆေး အသားဖြူဆေးမ...
Whistle with Your Fingers လေချွန်နည်း
Eye Laser မျက်စိနဲ့ လေဆာ
Super Gonorrhoea ဆူပါ ဂနိုးရီးယား
Indiana Eye Clinic အင်ဒီယာနာ အိုင်းကလင်းနစ်
Appreciation အီးမေးလ်ကနေ စာတစောင်ရတယ်
ဓါ နှင့် ဓာ ပဲ နှင့် ဘဲ
Swaziland ဆွာဇီလန် အမည်ပြောင်းခြင်း
SHS2Monywa ကျောင်းတုံးက သူငယ်ချင်းတွေ
Gene Sharp လက်ကြောတင်းကြပါ
San Francisco ဆန်ဖရန်ဆစ်စကို နွားမပေါင်ကျိုးခြင်း
Folded Photo ခေါက်ရိုး
The Ava Bridge အမှန်
Tinea Versicolor ညှင်း
ဘို့ နှင့် ဖို့
Cattle Market နွားရောင်းရန်ရှိသည်
Archimedes ငွေမစစ်တဲ့ သရဖူ
Toad Venom ဖားပြုပ်အဆိပ်
Monywa Stadium မုံရွာအားကစားကွင်း
Monywa Prison မုံရွာအကျဉ်းထောင်
Tonics for Children ကလေးအားဆေး
Well done သာဓု
Back Injury သုမနကျောမှာ
On Time စေတနာကော်ပီကို အချိန်ကိုက်ရပါကြောင်း
Fed Up With Wishes ဆုတောင်းစာတွေ မလာပါစေနဲ့လို့ ဆု...
Hundred Years' War နှစ်တရာစစ်ပွဲ
White Elephant Paper စက္ကူဆင်ဖြူတော်
Hammer မှတ်ကရော ဥပဒေ
An Arrow သည်လမ်း သည်ခရီး မြားတပြေးသာသာရှိလိမ့်မည်
Acid throwing အက်စစ် သင်္ကြန်
Menstrual Suppression ရာသီကိုပြောင်းစေနည်း